Ciidamada ammaanka Puntland oo magaalada Gaalkacyo ka bilaabay howlgal ammaanka lagu adkaynayo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamada ammaanka Puntland oo magaalada Gaalkacyo ka bilaabay howlgal ammaanka lagu adkaynayo
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. [Sawirka: Archive]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Puntland ayaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug maanta oo Isniin ah ka bilaabay howlgal ammaanka lagu adkeynayo, sida uu sheegay guddoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka.
Maxamed Ciise warsame oo ah guddoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka Mudug ayaa saxaafada maxaliga ah u sheegay in ciidamada ammaanka ay bilaabeen howlgalo ay ku sugayaan ammaanka guud ee magaalada Gaalkacyo.
Warsame ayaa uga digay gaadiidlayda in ay gawaaridooda ku xirtaan bacaha-madow ee lagu qariyo muraayadaha baabuurta.
Labo maalin kahor, taliyaha ciidamada booliiska dowladda Puntland Cabdiqaadir Shire Faarax ayaa u doortay Cusmaan Xasan Cuuke sidoo kale loo yaqaan (Af-dalow) in uu nqodo taliyaha cusub ee booliiska gobolka Mudug.
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo, maleeshiyada Galmudug ayaa madaafiic badan kusoo riday xaafada Garsoor ee Gaalkacyo,Puntland, iyaga oo ka jawaabaya weerarka, ciidamada Puntland ayaa ku ganay madaafiic dhanka Galmudug. Sida [...]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Ciidamada dowlada Soomaaliya oo ay dabada ka riixayaan kuwa AMISOM ayaa ku dilay deegaan u dhow tuulada Beerxaani oo kutaala gobolka Jubbada Hoose ugu yaraan sideed dagaalyahan oo Al-Shabaab ah, sida ay maanta [...]